BULSHADA Archives - Warqaad.com
BULSHADA DAAWO VIDEO: 15 Qodob oo ay qasab tahay inaad ka ogaato Taariikhda & Xaqiiqda Soomaaliya ? January 23, 2017 DAAWO VIDEO: 15 Qodob oo ay qasab tahay inaad ka ogaato Taariikhda & Xaqiiqda Soomaaliya ?
KENYA: Taageero kubada cagta ah oo Toorey lagu dilay Xili ay socotay ciyaar adag & Sababta oo yaab leh January 23, 2017 Taageero kubada cagta ah ayaa noloshiisa la dhaafiyay kadib ciyaartii dhexmartay kooxaha Tottenham Hotspur vs Manchester City ee horyaalka Ingiriiska ah
MA OGTAHAY in Dalka Australia markiisii hore la oran jiray New Holland ? January 22, 2017 Waa Barnaamij Cusub oo aad kala socon doontaan Shabakada Warqaad.com, waxana ku soo qaadan doonaa mar waliba Qodobada ugu xiisaha badan.
HALKAN KA DAAWO BARNAA
DAAWO: Go’aano adag oo laga soo saaray Kufsigii Galdogob (Akhriso) January 21, 2017 Kulan addag oo qaatay in muda ah kadib Odayaasha beeelaha ay ka dhasheyn Ragii Gabdhaha ku kufsaday Galdogob ayaa isku raacay Go’aano adag waxaana ka mid ah:
AQRISO: Qisada Gabadhii lagu kufsaday Galdogob iyo Sida ay wax u dhaceen “Hubaal waad ilmeyn” January 16, 2017 Dad badan ayaa laga yaabaa ineysan xog badan ka heyn sida uu ku bilowday isla markaana uu ilaa haatan ku socdo kiiska la xariira gabar 16 jir ah oo ay kufsi wad
Sawiro iyo Video laga duubay Gabar lagu Kufsaday GALDOGOB oo Xiisad abuuray & Ehelada Gabadha oo hadashay January 16, 2017 Dhalinyaro ku dhaqan magaalada Galdogob ee Gobolka Mudug ayaa kufsaday Gabar Yar, iyadoona ay ka duubeen Muuqaalo iyo Sawiro lagu Faafiyey Baraha ay Bulshadu ku
QISO XANUUN BADAN OO KU DHACDAY FANAAN: Qoyskii Faraxsanaa & Muragadii Lacagta (DAAWO) January 15, 2017 Ma rabo inaan sii qariyo nolosha xanuunka badan ee I soo martay, muddo dheer ayaan ku hayey laabteyda oo aan qarsanayey laakiin maanta waxaan go’aansaday in
Muuqaal: Damu-jadiid oo soo saartay Muuqaal ay ku ceebeysaneyso Musharax Sh Shariif January 14, 2017 Sh Shariif Sh Axmed ayaa kamid ah musharaxiinta utaagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ee loolanka xoogan la geli kara madaxweynaha haatan Xasan Sh Maxamuud.
DAAWO VIDEO: Haweeneey Soomaali ah oo la kulantay IBLIIS iyo Dood Yaab leh oo dhex martay January 14, 2017 Haweeneey Soomaaliyeed ayaa ka sheegeysay Qiso Cajiib ah oo dhexmartay iyada iyo Ibliis (Sheydaan), Hadaba waxan idiin soo gudbineynaa Wareysi uu wariye Caan ah
DAAWO: Qaybtii 21-aad Riwaayada Qooto Qooto oo aad u Qosol badan January 14, 2017 Waxan Halkan idin kugu soo gudbineynaa Qeybtii 21 Riwaayada Dr Qooto Qooto oo aad u xiiso iyo Qosol badan.
DAAWO VIDEO: 15 Qodob oo ay qasab tahay inaad ka ogaato Taariikhda & Xaqiiqda Soomaaliya ?
KENYA: Taageero kubada cagta ah oo Toorey lagu dilay Xili ay socotay ciyaar adag & Sababta oo yaab l